ရန်ကုန်မြို့ ၈ မိုင် ပေါက်စေတီ ကျောင်းတိုက်မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်တဲ့ ၁၉၆၂ က ၂၀၀၇ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဦးဝင်းတင်က အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။
ဒီပွဲမှာ ၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့က အမှာစကား ပြောကြားသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်က အစိုးရ ထုတ်ပြန်တဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေကို လျစ်လျူရှုတာ ဖြစ်သလို ကိုယ့်အရှက် ကိုယ်ခွဲတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှက်ခွဲပြတာ ဒီအစိုးရလို အစိုးရဟာ ဒီအစိုးရပဲ ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ အကုန်လုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ ရုန်းကန်ပြီးတော့ လုပ်သွားရမှာပဲ ဖြစ်တယ်”
ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်လိုချင်တာ အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၅၀ ကျော် တက်ရောက်တဲ့ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို ၁၉၇၄ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးကိုကိုလေးက ကြီးမှူး စီစဉ်ပေးတာပါ။
Old dog won’t be given-up old bad habits easily. Who is actually governing Burma, Thein Sein or Than Shwe? Thein Sein is just one of Than Shwe’s puppets. He is not free man and he can be removed anytime by any reason. Military always think gun is powerful than book.
Daw Su and NLD are scarifying its own policy for to free all Political prisoners. However, Government is still resisting release political prisoners.
I believe Burma is inevitable for another uprising if Burmese regime resist changing smoothly to democracy.
U Win Tin is the best leader for BURMA.
Jan 04, 2012 08:21 PM
Jan 04, 2012 05:34 PM